Reer guuraaga Calmadow | allsanaag
Reer guuraaga Calmadow
Reer Guuraaga Calmadow iyo ganacsatada Boosaaso yaa u baahan in cunaqabatayn lagu soo rogo?
Wadamadda reer Galbeedka ee dagaalka kula jira Dadqalatooyinka iyo argagixisaada caalamiga ah , waxay ogadeen sababta qura ee loola dagaalami karo, oo looga adkaan karo kooxahan dadka diIsha inay tahay wada shaqayn dhab ah oo dhex marta Bulshada degaanka iyo ciidamada amniga.
Laakiinse maamulka Puntland mid ka duwan arinta Caalmka ayeey iyagu qaateen, oo waxay cunaqabatayn ku soo rogeen reer Guuraagii buurta Calmadow oo markii horeba ay argagixisadu dhibaateeyeen oo ay hadda u sii dheer tahay abaar xun. Taasina maaha mid kalsooni ku abuuri karta bulshaddii la doonayey inay ka war keenaan dadka dhibaateenaya, Waxayna sababi kartaa amni xumo hor leh iyo kala shaki .
Hadaba maamulka Puntland goormay sharciga hor keenayaan ganacsatafa Boosaaso qaarkood oo ku kacay danbiyada Lacag been abuur ah oo la sameeyey, Raashinka caalamku ku deeqo oo ay ka gataan siyasiyiin tuuga ah , marka danbena qiimo badan kaga iibiyaan Danyarta.
Ganacsatadan qaarkood ayaa raashinka geeya Buurta Calmadow, Ganacstadan qaarkood ayaa Gawaaridooda lagu qaadaa raashinka la geenayo Calmadow , ganacsatadan qaarkood ayaa si ay lacag uga sameeyaan argagixisada waxay ka kireeyaan Guryahooda, iyo Huteeladooda. Ganacsatadan ayaa telefoono magac Iiyo SIM CARD been ah ugu fura Puntland . Ganacsatadan ayaa ku abtirsada ama qabiilkoodu yahay Beeso ama lacag.
Reer Guuraaga Buurta Calmadow, oo markii horeba dhibaataysnaa in dhibkii haystay dhib kale loogu sii daro, loogama guulaysan karo la dagaalanka argagixisada iyo Dadqalatooyinka, oo waa arin aan si fiican looga soo fakerin, waxay keeni kartaa reer Guuraaga Calmadow oo cunaqabatayn la saaro in cadowga Puntland sida SNM in ay taageero ka helaan bulshada qaarkood siddii horay u dhacday. maanta waxa jira cadow badan oo ay Puntland leedahay oo dhegta u taagaya fursad ay helaan
Ugu danbayntii Bulshada Calmadow ku nool iyo guud ahaan Puntland, waxay labaduba doonayaan in degaanada ay degan yihiin ay nabad ugu noolaadaan oo ay ka saaraan cadowga ku soo duulay . Hadaba si tani u hirgasho waa in la helaa kalsooni buuxda oo dhex marta Bulshada Puntlandiyo Ciidanka amniga .
← Lixda Tiir ee Xasan Culusoow Arrin Dalka Soomaaliya aan Horrey Ugga Dhicin →